Ahmed Awad (Rabsha/Rabso) - Safari Phone
Ahmed Awad (Rabsha/Rabso)
Ahmed Awad (Rabsha)
Music Teacher, Music Writer and composer, Guitarist, Singer and Melody Maker.
Hobol Ka mid ah Hoboladii ugu caansanaa ee soomaray Taariikhda Fanka Soomaliyeed.
Wareysi Gaaban oo ay La yeelatay KASMO Hobolka Ahmed Awad (Rabsha)
Ahmed Cawad Saalim "Rabsha" wuxuu ahaa fanaan caan ah oo si weyn ugu dhex muuqdday fanka soomaaliyeed, gaar ahaan xagga dhismaha iyo qoraalka muusiga, wuuna ku jiray shaqsiyaad kooban oo loogu dambeeyey qoraalka iyo codeynta muusiga oo uu ku soo bartay jaamacad ku taalay dalka suudaan.
Ahmed oo Ahaa Hesaa aad u cod macaan waxaa ka mid ahaa heesihii uu ku caan baxay Laanyahay magooshay iyo Axadii.
Bishii Augost sanadka 2001, magaalada London wargeyska Kasmo ayaa fursad u helay iney La yeeshay wareysi Fanaanka wuxuu u dhacay sidan hoos ku xusan:
KASMO: Ka waran Noloshaadii Fanka?
Ahmed Rabsha: Fanka waxaan ku soo biiray anigoo jira 13 sanno, waxaana ka dhaxlay Aabahey oo ahaa fanaan ku caan baxay kabanka, isagaan iigu dhiiro Geliyey.
Fanka waxaan ka bilaabay in aan ka heeso xafladaha iyo aroosyada, ka dibna sanadka markuu ahaa 1963 dii waxaan fursad u helay in aan la shaqeeyo fanaanka caanka ahaa ee Cabdikariim Faarax Jiir.
KASMO: Xilligaas Heeso aad adigu sameysay miyaad ku heesi jirtay?
Ahmed Rabsha: Maya, waxaan ku heesi jiray Heesaha Fanaaniinta kale.
KASMO: Kooxdee baad ka tirsaneyd, goormeese la aasaasay?
Ahmed Rabsha: Waxaan ka tirsanaa Kooxda "Soul Full Five" oo la asaasay 1969 kii, koodeenu waxay ka koobneyd afar Qofood. Goobihii aan ka tumi jirnay na waxaa ka mid ahaa Lido, Lamamba iyo Steak House.
KASMO: Fanaaniintii aad isla soo shaqeyseen yaa ka mid ahaa?
Ahmed Rabsha: Intii aanan kooxda sameyn waxaan isla shqeyn jirnay hesaagii caanka ahaa mohamed mooge, ka dibna waxaan is baranay Mohamed ibrahim Hadraawi oo aan ka wada shaqeyn jirnay Wasaarada Hidaha iyo Tacliinta oo aynu aheyn shaqaalheeda joogtada ah, 1970 waxaan Heesaha wadaniga bari jirnay Gabdhaha Dugsiga dhexe ee Bartamaha. waxaan kaloo Tababare ka noqday Dugsiga Sare ee Boliiska kaasoo aan ka bixin Jiray saminaar 6 bilood soconaayey oo ku saabsanaa barashada Muyuusiga.
KASMO: Heesahii aad hadraawi isla sameyseen maxaa ka mid ahaa?
Ahmed Rabsha: Aniga iyo hadraawi wada sameynay waxaa ka mid ahaa heestii caanka aheyd ee AXAD, ILA-TALi oo loo yaqaan AFGOOYE, LAAN-YAHAY MAGOOSHEE, BILANEY WALAAL, oo aan isla qaadnay aniga iyo fanaandii Hibo. Anigana xiligaa Hibo u sameeyey Heestii AAN-ISGARABSANO.
KASMO: Ma jirtaa Koox Faneed oo aad ka tirsneyd xilligaas?
Ahmed Rabsha: 1970 waxaan ka tirsanaa Kooxda la oran jiray Barqad Cas oo ka madax banaaneyd Raadiyaha iyo Masraxa. Waxaaana Kooxdaas ka mid ahaa Shimbir, Mohamed ahmed, Feisal Omar Mushteek, Dararamle, Hadraawi, Mohamed mooge, Ahmed Mooge.
KASMO: Ka waran Xagga Waxbarashada?
Ahmed Rabsha: Runtii anigu waxaan ka shaqeyn jiray Famashiyo Lagu Iibiyo Daawooyinka taas oo aheyd howsha aniga sida tooska u hayey balse hiwaayadeydu waxay aheyd Fanka oo aan aad u jeclaa, kolkaa 1974 kii ayaa waxaan fursad u helay deeq waxbarsho oo bixisay Dolwlada Suudaan, Waxaana Jaamcada Fanka ee ku taal Khartum ku jiray 5 sanadood halkaa oo ka soo qaatay BA oo ah dhanka dhismaha Muusiga.
KASMO: Fanaaniinta aad isku barateen Suudaan waxa manoogi sheegi kartaa?
Ahmed Rabsha: Muddadii aan Suudaan joogay waxaan is baranay al-mulaxin cumar Shaacir, fanaanka weyn yusuf Al-Musri iyo Mohamed wardi
oo aan isaga isku soo gaarnay Sanadkii Koowaad iyo Labaad ee Jaamacada.
KASMO: Kolkii aad Dalka ku soo noqotay maxaad qabatay?
Ahmed Rabsha: Dalka markaan Ku soo noqday tacliinta aan soo bartay wax wey n kuma qaban waayo Fanaaniinta Qalabka kala duwan ee muusiga tuma waxay ahaayeen kuwo iyaga muusiga is baray oo aan Nootooyinka qorin, kolkaa waxay taasi igu kaliftay in aan shaqo dibada u doonto, waxaana Maclin Muusga ka noqday Machad Ku yaal Dalka Dubai.
KASMO: Xiriirka Fanaaniinta Dalaka idinka dhexeeyey sidee buu ahaa?
Ahmed Rabsha: Xiriirka aniga iyo fanaanta kale weligii ma istaagin, waxaana kuugu filan Heesaha uu SULFA qaaday badankood oo aniga lahaa iyo weliba heesaha uu qaadi jiray killer iyo fanaaniin kale ayaa heesaheyga ku heesi jiray.
KASMO: ka waran Riwaaydaha ?
Ahmed Rabsha: Masraxa soomaliyeed soo badhigidiisa aad buu waayahii dambe u hurumaray. Aniga door baan ku lahaa sida Heesha Hergalay oo aan u sameeyey muusik iyo Heesaba.Dhanka Riwaayadaha waxan ka qeyb qaatay Riwaayadii Sharafmaleh Sheeko Naag, Sir Naag Lama salgaaro iyo kuwa kale. Fanaaniintii aan isla soo shaqeynay waxaa ka mid ahaa xiligaas Aweys Geedow DiinlE oo lahaa Heesihii ugu Horeeyey ee aan ka qaado Riwaayadaha, Dr. Daahir Nuur Raafi, Abukar Tooto, Suufi xaaji, Cabdulqaadir Nuuraani, Macow Aw-Diinle, Cali Cusmaan Daroog Iyo Fanaan kaloo badan oo hormood u ahaa fanaka Banaadiriga.
KASMO: Hadda Maxaad Ku talo JIrtaa?
Ahmed Rabsha: Hadda waxaan Aan ku tala jiraa sidii aan uruurin lahaa Howlihii faneed ee Taariikhiga ahaa , anigoo ka faa ideysanaaya Hurmarka tignoolijiyada ee maqalka iyo muuqaalka waayo, si fudud laguma dhaafi karo Howshii ay soo qabteen Muusikiistiyaashii iyo fanaaniintii hore sida Macalow Nuur, Mabruuki, Qaasim Hilowle, Cabdala Radaaci, Aweys geedow, Mooge, Abdulaahi Qarshe, Ahmed Nur yusuf iyo Kuwa kale oo badan.
Allaha u Naxariistee Ahmed Cawad Rabsha wuxuu ku dhashay 1945 kuna soo barbaaray Magaalada Muqdisho.
Ahmed oo ku noolaa sanooyinkii ugu dambeeyey magaalada London isaga oo ku howlan Cilmi Baarista Fanka ayuu ku geeriyooday magaalada London,wuxuuna ifka kaga tegey Marxuumka 10 caruur ah.
Filimada oo jilay: Halkaan Riix